Saturday February 22, 2020 - 14:00:17 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in safarkiisa ay ugu muhiimsanaayeen illaa sadax arrimood oo dhammaantood la xariira kobcinta dhaqaalaha Itoobiya.
Inkastoo aaney Somaliland faahfaahin ka bixin ujeedada wafdiga, haddana Wargeyska Geeska Afrika ayaa sheegay inuu helay xog rasmi ah oo sheegeysa in Wasiirka Maaliyadda Itoobiya uu Hargeysa u tegay dardar galinta heshiisii Dekedda Berbera oo ay Xabashidu ku lahaayeen 19%.
Sidoo kale wuxuu Wasiirku la yimid warqad looga soo dhiibay magaalada Adis Ababa oo lagu dalbanayo in la yareeyo canshuurka laga qaado badeecada u socota dhanka Itoobiya.
Qorshahan ayaa yimid kadib markii Ra’iisulwasaare Abiy uu todobaadkii hore safar ku tagay Imaaraadka Carabta oo ay shuraako ku yihiin Dekedda Berbera. shirkadda DP World ayaa leh%51, Somaliland% 30 iyo Itoobiya oo leh %19
Socdaalka Wasiirka Maaliyadda ayaa dhammeystir u ahaa safarka Abiy ee Imaaraadka si loo sii dardar galiyo heshiis ku sheegga Dekedda Berbera oo si cad loogu boobay hantida ummada Soomaaliyeed.
Illaa iyo hadda waxay Soomaalidu la yaaban tahay halka ay Itoobiya kasoo gashay heshiiska iyo waxa ay ku mudatay in ay %19 ku lahaato?
Sida xogta lagu helayo Shidde ayaa Muuse Biixi kala hadlay tallaabada uu Abiy ku doonayo inuu Farmaajo ku geeyo magaalada Hargeysa wuxuuna u sheegay in arrintan ay soo gashay danta Itoobiya iyo dadaaladeeda ku aadan Geeska Afrika islamarkaana loo baahan yahay inuu sideeda u qaato lana macaamilo natiijo walba oo kasoo baxda.
Muuse Biixi ayaa waxaa loo sheegay in Farmaajo uu dhaqan galiyay dhammaan qodobadii ay Itoobiya ka dalbatay oo uu kamid ahaa inuu raalli galin ka bixiyo tabashooyinka Somaliland iyo inuu raaco Abiy Axmed.
Sidoo kale warbixinta todobaadlaha ah ee "Week In The Horn” ee ay Jimco walba soo saarto Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Itoobiya ayaa waxaa looga hadlay qodobo ay kamid ahayd raalli galintii qabyada aheyd ee uu Farmaajo ka bixiyay xasuuqii uu Siyaad Barre u geysta Hargeysa, Wasaaraddu waxay sheegtay in ay Adis ababa ku kulan siiyeen Farmaajo iyo Biixi.
Itoobiya oo qarniyo badan Soomaaliya kula soo jirtay dagaal ayaa isku muujinaysa in ay markii ugu horreysay taariikhda ay heshay daba dhilifyo u suura galin kara admaacdeeda laakin ummadda Soomaaliyeed wali waa ay nooshahay waxayna u baahan tahay iney go’aan ka qaadato halista kusoo wajahan.
Dalka Itoobiya waxaa kusoo wajahan doorasho waxaana uu Abiy doonayaa inuu dadkiisa kusoo jiito sida foosha xun ee uu ugu cayaarayo dadka Soomaaliyeed ee Muslimiinta ah ee uu Allaah makaniyay dhulka istaraatiijiga ah ee kheyraadka badan ku fadhiya.